जहाँ कहिल्यै दसैँ मनाइँदैन... | Ratopati
जहाँ कहिल्यै दसैँ मनाइँदैन...
personशम्भु दंगाल exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १७, २०७६ chat_bubble_outline1
खोकनाको खेतमा लहलह धान झुल्दैछ । तोरीका लागि प्रख्यात खोकनामा तोरी नफलेपनि विदेशबाट आयातित तोरीलाई भुटेर यहाँका तोरी मिलले तेल निकालिरहेका छन् ।
देशका सबै ठाँउमा दसैँको चटारो भएपनि यहाँ भने फरक दृश्य छ । यहाँ दसैँको भन्दा पनि सिकाली जात्राको चटारो छ । दसैँ नमान्ने परम्परा रहेको खोकनामा उनीहरु अन्यत्र जस्तो जमरा राख्दैनन् र टीका पनि लगाउँदैन । प्राचिनकालदेखि नै यहाँ सिकाली जात्रा मनाईदै आइएको छ ।
स्थानीयहरु सिकाली जात्राका लागि तयारी गरिरहेका छन् । नेवार समुदाय अन्र्तगत डङ्गोल र महर्जनहरुको बसोबास रहेको खोकनामा प्राचिन कालदेखि नै सिकाली जात्रा बनाउने गरेका छन् ।
अहिले स्थानीयहरु जात्रामा व्यवस्त छन् । खोकनाबासीका आराध्यदेव र इष्टदेवका रुपमा खोकनाको मुख्य भागमा रुद्रायणीको मन्दिर रहेको छ । जुन मन्दिरलाई सिद्धिकाली पनि भनिन्छ । रुद्रायणीलाई हिन्दु तथा बौद्धमार्गीले समान रुपमा आदर गर्ने परम्परा रहेको छ ।
परम्परागत नाँच, देवीको पूजा अनि आफन्त भेला भएर भोज खाने, रमाइलो गर्ने सिकाली जात्राको विशेषता हो ।
यसरी गरिन्छ सिकाली जात्रा
खोकनामा परम्परागत जात्रा सञ्चालनका लागि तगु, सलागु र जगु गरी तीनवटा गुठी रहेका छन् । सिद्धिकाली अर्थात सिकाली जात्रा असोजको शुक्ल पक्ष तृतीयाको दिन हुन्छ । यो जात्रा ९ दिनसम्म चल्छ ।
जात्राको सुरुवात अन्र्तगत प्रतिपदाको दिन गुठीका चार–चार जना कुमार केटालाई नुवाई धुवाई गरी गाउँ परिक्रमा गराइन्छ । उनीहरुले खोकनाको सिकाली चौर स्थित मन्दिरमा पूजा गर्छन् । कुमार केटाले हरेक दिन नुहाउने र बेलुका मात्र एक छाक खाना खाने गर्छन् । भात खान पाउँदैनन्, अदुवा चाकु चिउरा, भट्मासलगायत मिसाइएको खाना खुवाउने चलन रहेको स्थानीय हरिराम डङ्गोलले जानकारी दिए ।
मन्दिरका पूजारीलाई थकाली भनिन्छ । थकालीले रुद्रायणी मन्दिरमा हरेक दिन पूजा गर्छन् । सिकाली चौरमा ४ दिसम्म थकालीले पूजा गर्ने चलन छ ।
दोस्रो दिन पनि व्रत बसेका कुमार केटाहरुले रुद्रायणीको पूजा गर्छन् । उनीहरुलाई गुठियारले थकाली अर्थात् पूजारीको घरमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाएका हुन्छन् ।
तृतीयाका दिन खोकनाका ३ वटै गुठीका गुठीयारहरू दिनभरि व्रत बस्छन् । त्यस दिन रुद्रायणी स्कूलको छेउ खेतबाट खोकना प्रवेश गर्न गेटछेउमा बली दिइन्छ । पूजा गरेर ३ वटा गुठीको राँगाका बली दिने गरिन्छ । गुठियारहरुले रागाको मासुको छोयला बनाउने र भोज खाने चलन छ । साझ पनि राँगाको मासुकै छोयला बनाएर भोज खाने चलन छ ।
जात्राको चौँथो दिन पनि चार–चार जना कुमार केटाहरूले सिकाली चौरमा गएर पूजा गर्छन् यो दिन पनि प्रत्येक गुठीघर अगाडि राँगा काटिन्छ । गुठीघरमा राँगाको मासु पकाइन्छ र त्यसलाई सिकाली चौरमा लगेर भोज खाने चलन छ । राति गुठीघरमा वीरभद्र घ्याम्पो देउता प्रतिस्थापन गरिन्छ ।
खोकनामा सिकालीको मुख्य जात्रा पाँचौ दिन हुन्छ । यो दिन रुद्रायणी मन्दिरबाट मुर्ति निकालेर खटमा राखिन्छ । खोकनाबासीहरुले घर घरबाट आएर पूजा खटमा राखिएको रुद्रायणीको पूजा गर्छन् ।
साँझ सरकारी तहबाट उपलब्ध गराइएको राँगाको बली दिइन्छ र भोज खाने चलन छ । साँझ पनि खटमा मुर्ति राखेर जात्रा गरिन्छ र मुर्तिलाई पुनः मन्दिरभित्र पहिलेकै ठाउँमा राखिन्छ ।
जात्राको छैटौँ दिन सबै गुठियारहरु सिकाली चौरमा जम्मा भएर रुद्रायणी गुठीका ४६ जवान देउता खलकले देवी नाच नाँच्छन् । वीरभद्र, महाकालीका रूपमा देउता खलकलाई तान्त्रिक विधिबाट निकालिन्छ । उनीहरू सिकाली चौरबाट नाच्दै गाउँ परिक्रमा गर्छन् ।
जात्राका क्रममा विभिन्न गुठीहरुले देवीको मुर्ति झिक्ने र निकाल्ने गर्छन् ।
सप्तमीको दिन कोइलाछीमा देवताको नाँच गरिन्छ । यो दिन गुठियारका ४६ जनाले धार्मिक वस्त्र धारण गरेर नाँच नाच्ने गर्छन् ।
जात्राको आठौं दिन रुद्रायणीको मुर्तिलाई बाहिर निकालेर पूजा गरिन्छ र साँझ पुनः मन्दिरमा प्रतिस्थापन गरिन्छ । नवौँ तथा अन्तिम दिन खोकनाबासीले आ–आफ्नो घरमा पूजा गर्ने र भोज खाने चलन रहेको हरिराम डङ्गोलले बताए ।
यसरी खोकनाबासीले आफ्ना जात्रा सम्पन्न गर्छन् ।
तस्विरहरु : सुवास श्रेष्ठ
Oct. 4, 2019, 8:35 p.m. Tilak Shrestha
Shree Siddhi Kali or Shikali is Shree Bhagawati Devi. It is just another form of Dasain.
‘राजा त्रिभुवन हिन्दुस्तान गएर बस्नु नै गल्ती थियो, हामी अहिले त्यो ऋण तिर्दैछौँ !’
अभिनेता शिव श्रेष्ठको जीवन : सास रहेसम्म चलचित्र खेल्छु
कसरी पुग्यो सगरमाथामा प्रथम मानव पाइला ?
क्वारेन्टाइनको दुर्दशा : होटललाई क्वारेन्टाइन किन नबनाउने ?
पिँजडाको सुगाझैँ भइयो
नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर नै हो ?
११ जुनबाट ला लिगा सुरु हुने
त्रिविले ८० वटासम्म आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न सक्ने
कोरोना संक्रमणको संकटमा डुब्न थाले बस्ती
शनिबार कुन राशि हुनेहरुका लागि फलदायी ?